Emptiness: အိပ်မက်ချစ်သူတွေက ရွက်လွင့်လာခဲ့ကြပြီ
မပြန်နဲ့ မပြောဘူး ချစ်သူ၊
ကိုယ်ဟာ ဖွင့်လို့ထားတဲ့ တံခါးလေးတစ်ချပ်၊
အလွယ်တကူ မမုန်းတတ်ခဲ့သူ၊ အလွယ်တကူ မချစ်နဲ့ချစ်သူ၊
မဒီရဲ့ ”အိပ်မက်ချစ်သူ“ တေးသံစဉ်ကို နားထောင်ယင်း စိတ်ကူးတွေက တက်မပါတဲ့ ရေယာဉ်တစ်စီးလိုပဲ လွင့်မျောကာစီးပါလာခဲ့ပါတယ်။ ကျနော်အပါအ၀င် ကမ္ဘာ့လူသားတွေဟာ အိမ့်မက်ချစ်သူတွေပဲမဟုတ်ကြပါလား။
လွန်ခဲ့ပြီးအတိတ်တွေကကောင်းခဲ့တဲ့အာရုံတွေကိုရော၊ ဆိုးဝါးခဲ့တဲ့အာရုံတွေကိုပါ အမှတ်သညာယာဉ်ပေါ်ကို ဆွဲခေါ်တင်လိုက်ပြီး ကြံကြံဖန်ဖန် တုန့်ပြန်ကြပါတယ်။ မရောက်သေးတဲ့ ကောင်းကောင်း၊ ဆိုးဆိုးအာရုံတွေကိုလဲ (Hope)မျှော်တွေးပြီး ခံစားတုံ့ပြန်မှု(Reaction)ပေးကြပြန်ပါတယ်။ အမှန်တကယ်တော့ လက်ရှိပစ္စုပ္ပန်မှာပဲ ကောင်းကောင်းမွန်မွန်လုပ်ဆောင်စရာတွေကို အတိတ်အနာဂတ်အတွေးတွေနဲ့ မရောထွေးပစ်ဘဲ လုပ်ဆောင်သင့်ကြပါတယ်။ အတွေးတွေက လျှောက်လှမ်းရမယ့်လမ်းကို ဖင့်နှေးစေ၊ လင့်ဟင်းစေတာတော့အမှန်ပါပဲ။
အတိတ်နဲ့ အနာဂတ်အာရုံတွေက ပကတိဖြူစင်နေတဲ့ စိတ်ဓာတ်ခွန်အားကို ညစ်နွမ်းစေ၊ ပျော့ညံ့စေခဲ့ကြပါတယ်။ အလိုင်းမင်းမချိန်ထားတဲ့ယာဉ်တစ်စီးလိုပဲ ဘဲ့လန့်ခ်ျ(Balance)မဖြစ်တဲ့ ဘီးတွေနဲ့လမ်းမပေါ်မှာ မောင်းရတာ နှောက်နှေးစေသလိုပေါ့။
အတွေးတွေရောနှောထားတဲ့စိတ်ဓာတ်ဟာ ဘယ်အလုပ်ကိုပဲ လုပ်လုပ် နှေးကွေး ဖင့်နှေး၊ယုတ်လျော့စေတာတော့အမှန်ပါပဲ။ ဘာနဲ့သွားတူပြန်သလဲဆိုတော့ ရေရောထားတဲ့ ဒီဇယ်ဆီနဲ့သွားတူနေပြန်ပါတယ်။ ရေရောဆီပါတဲ့ ကားကိုမောင်းရတာ လိုရာခရီးကိုအချိန်မီရောက်ဖို့ ဖင့်နှေးစေပါတယ်။ အတွေးအာရုံတွေနဲ့ ရောစပ်ထားတဲ့ စိတ်နဲ့ စာဖတ်ရတာ အရသာ မထိရှလှပါဘူး။ အတိတ်နဲ့အနာဂတ်တွေဆီကိုခဏခဏရောက်ရောက်သွားတတ်တဲ့ အတွေးအာရုံတွေက လက်ရှိဖတ်နေဆဲ ပစ္စုပ္ပန်စာဖတ်အာရုံကို ထုံထိုင်းတုံ့ဆိုင်းစေပါတယ်။ ဒါကိုပဲ စိတ်ပျံ့လွင့်နေတယ်လို့ အမည်ကင်ပွန်းတပ်ကြတာလားမသိပါဘူး။ ဘ၀သံသရာခရီးလျှောက်လှမ်းနေကြတဲ့ ကျနော်တို့အဖို့မှာ အတိတ်အနာဂတ်အာရုံတွေများစွာ ပွေ့ပိုက်လျက် အာရုံဝန်တွေပိကာ ယက်ကန်ယက်ကန်နဲ့ လျှောက်လှမ်းနေကြတဲ့သူတွေမဟုတ်ပါလား။
မဇ္ဈိမနိကာယ်၊ ဥပရိပဏ္ဏာသပါဠိ၊ ၀ိဘင်္ဂ၀ဂ် မှာတော့ တစ်ချိန်က ဒီလို မှတ်သားခဲ့ဖူးပါတယ်။
၁။ အတီတံ နာနွာဂမေယျ ၊ နပ္ပဋိကင်္ခေ အနာဂတံ။
ယဒတီတံ ပဟီနံ တံ ၊ အပ္ပတ္တဉ္စ အနာဂတံ ။
၂။ ပစ္စုပ္ပန္နဉ္စ ယော ဓမ္မံ ၊ တတ္ထ တတ္ထ ၀ိပဿတိ ။
အသံဟီရံ အသံကုပ္ပံ ၊ တံ ၀ိဒွါ အနုဗြူဟယေ ။
၃။ အဇ္ဖေ၀ ကိစ္စမာတပ္ပံ ၊ ကော ဇညံ မရဏံ သုဝေ။
၁။ အတိတ်တွေက ကျန်ရစ်နေခဲ့ပါပြီ၊
၂။အတိတ်အစွန်းမှာရော အနာဂတ်အစွန်းမှာပါ တွယ်ကပ်မနေတော့ဘဲ ပစ္စုပ္ပန် ပဇ္ဈိမပဋိပဒါအလယ်လမ်းမှာပဲ အကျိုးရှိရှိ ဇွဲနပဲနဲ့ လျှောက်လှမ်းလာခဲ့ကြပါတော့။(ဆဋ္ဌမအာရုံဇာတ်ကားမှာတော့ လူနဲ့ဓားကို တစ်ထပ်တည်းကျအောင်လေ့ကျင့်ထားပါတဲ့)
မနက်ဖြန် တဘက်ခါဆိုတာ မသေချာမရေရာပါဘူး။
သေးမင်းက ငါတို့ဘ၀တွေကို စတေးပစ်ဖို့ တွေ့ရာသင်္ချိုင်း ဓားမဆိုင်းဘဲ စောင့်နေခဲ့ပြီ။
ငယ်ငယ်ကတည်းက ပြင်ပအာရုံတွေကိုပဲ ကျက်စားတတ်တဲ့အထုံပါလာတဲ့ စိတ်ကတော့ ကိုယ်ကျက်စားရာ ပတ်ဝန်းကျင်ကအရာတွေကို အမှတ်သညာနဲ့ တစ်ဖြည်းဖြည်းသိုမှီးသိမ်ဆည်းလာရာကနေ စိတ်တွေပေါ်မှာ ဆေးရောင်စုံတွေဆိုး၊ တံဆိပ်(label)တွေခတ်နှိပ်လာမိကြပါတယ်။ ကာလတွေကြာလာတော့လဲ အလေ့အထ၀ါသနာဟောင်း(Old Habitual Batten) အနေနဲ့ ပုံစံခွက်ထဲသွတ်သွင်ယူတဲ့အကျင့်ပါလာကြပါတယ်။
ကြားဖူးတဲ့ ပုံပြင်တစ်ပုဒ်ကို ပြန်လည်ဖောက်သည်ချပြရယင်တော့………….
တစ်ခါတုန်းက ဇင်ရဟန်းနှစ်ပါး တစ်ခရီးတည်း အတူသွားကြပါသတဲ့။ လမ်းခရီးတစ်နေရာအရောက်မှာတော့ တောင်ကျစမ်းချောင်းကလေးတစ်ခုဆီကိုရောက်လာကြပါတယ်။ မိုးဦးကျစ ချောင်းရေက ရေစီးသန်နေလေတော့ ကီမိုနိုဝတ်စုံနဲ့ ကမ်းတစ်ဖက်ကို ကူးဖို့ ချီတုံချီချဖြစ်နေရှာတဲ့ ဂျပန်မလေးတစ်ယောက်နဲ့တွေ့ကြသတဲ့လေ။
ဟိုဘက်ကူးဖို့ ကြောက်နေရှာတဲ့ ကလေးမလေးကို ရဟန်းတစ်ပါးက မပြောမဆိုနဲ့ ပွေ့ယူလိုက်ကာ ချောင်းကိုဖြတ်ကူပြီး ချထားလိုကခဲ့တယ်။ ပြီးတော့ အဲဒီရဟန်းနှစ်ပါးက သွားလိုရာခရီးကို ဆက်လက်ကြွခဲ့ကြပါတယ်။ ကလေးမလေးကို မကူညီတဲ့ ကျန်ရဟန်းတစ်ပါးက လမ်းခရီးတစ်လျှောက် မနော စိတ်အစဉ်(မနေဒွါရ၀ီထိ-Mind Thought Procession)မှာ ” အင်း…. ဒီကိုယ်တော့်နှယ် ၊ ၀ိနည်းတွေထဲမှာ မာတုဂါမတွေကို ရဟန်းတို့က မတွေ့ထိကောင်းဘူးလို့ ပြောထားလျက်ပါနဲ့ ဒီကိုယ်တော်ကတော့ မအပ်မရာလုပ်လာခဲ့ပြီ“ ၊ ”အများတစ်ယောက်ယောက်ကများ မြင်တွေ့ ကြားသိခဲ့ရင် ကဲ့ရဲ့စရာပဲ ။ မအပ်မရာကိုလုပ်လိုက်တာပဲ“၊ အဲဒီလို အတွေးရေယာဉ်ကြောမှာ မျောစီးပြီး ကျောင်းသင်္ခန်းအထိဆိုက်ရောက်လာသတဲ့။
ကျောင်းရောက်တော့ သူသဘောမကျ၊ မကျေနပ်ခဲ့တဲ့အရာကို ပွေ့ယူကူညီခဲ့တဲ့ရဟန်းကို ဖွင့်ပြောလိုက်ပါတယ်။ ပွေ့လာခဲ့တဲ့ ရဟန်းက အဲဒီအတွေးကြားမှာမျောစီးလာတဲ့ ရဟန်းကို ဒီလိုပြန်ပြောလိုက်သတဲ့။
” အော်… အရှင်ဘုရားက အဲဒီကလေးမလေးကို ကျောင်းသင်္ခန်းအထိ(မနောဒွါရ၀ီထိနဲ့)သယ်ယူလာတုန်းပဲကိုး၊ တပည့်တော်ကတော့ အဲဒ်ီနေရာမှာပဲ ချထားခဲ့ပါပြီ“ တဲ့လေ။
ဒီလိုပဲ လူသားတွေကတော့ နေ့စဉ်နဲ့အမျှ ငါးပါးအာရုံ (ပဉ္စဒွါရ၀ီထိ- Five-Sensational Thought Procession)နဲ့ တွေ့ထိခံစားလာရပြီးသမျှ အတိတ်အာရုံတွေကိုရော၊ မတွေ့မထိမခံစားသေးရတဲ့ အနာဂတ်အာရုံတွေကိုပါ လက်ရှိ ပစ္စုပ္ပန်အာရုံနဲ့ ရောဆီလို ရောနှောရတာကို ၀ါသနာပါ(Accustom)လာခဲ့ကြတယ်။ အလေ့အထဟောင်းတစ်ခုအနေဖြင့်လည်း တုံပြန်မှု (Reaction)တွေလုပ်လာခဲ့ကြပါတယ်။
ဥပမာနောက်တစ်နည်းထပ်ပေးရယင် လူတစ်ယောက်ရဲ့လက်မှာ အနာခြောက်ခုဖြစ်နေပါတယ်။ အနာခြောက်ခုဖြစ်နေတဲ့လက်ကို ဆားငန်ရေထဲ စိမ်လိုက်ယင်တော့ ခြောက်နေရာက စပ်ဖျင်းဖျင်းခံစားကြရပါတယ်။ အနာလေးခုရှိတဲ့လက်ကို ဆားရေစိမ်ယင်တော့ လေးနေရာနာမှာ နာမှာပါပဲ။ အနာ(Mental Defilements)တစ်ခုမှ မရှိတဲ့ လက်ကို စိမ်ယင်တော့ စပ်ဖျင်းဖျင်းဝေဒနာကို မခံစားရတော့ပါဘူး။
လူတွေမှာလဲ မျက်စိအနာမှသည် စိတ်အနာအထိ မွေးရာပါ အပေါက်ခြောက်ခု(ဆအာယတန-Six Bases)ပါလာကြတယ်။ အဲဒီမျက်စိမှသည် စိတ်အထိအနာပေါက်တွေဟာ အာရုံဆိုတဲ့ ဆားငန်ရေ(Senses)နဲ့ထိတဲ့အခါကျတော့စပ်ဖျင်းဖျင်း(ဝေဒနာ-Sensation)ဖြစ်လာကြပါတယ်။ ဒီလိုစပ်ဖျင်းဖျင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပဲ ဆောက်တည်ရာမရ နေ့စဉ်နဲ့အမျှ အနာပေါက်တွေကို ခဏတာကုသဖို့ လိမ်းဆေးတွေရော ၊ သောက်ဆေးတွေကိုပါ ရှာဖွေဖို့ ပြေးလွှားနေကြရပါတကားလို့ လယ်တီဆရာတော်ဘုရားစပ်ဆိုထားတဲ့
ခါတော်မှီသီမဝေ့နိုင်ဘူး၊ ဒီကွေ့တွင် နေ့ကုန်မျောပြန်ရ၊
ဆိုတာကို ညဉ်းတွားနေမိပြန်ပါတယ်။ တကယ်တော့ ရှာဖွေခဲ့သမျှဆေးတွေဟာ ဗုဒ္ဓပေးခဲ့တဲ့ သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာဆေး တွေမဟုတ်လေတော့ ရောဂါက အမြစ်ပြတ် မပျောက်ဘဲဖြစ်နေပါတယ်။ တစ်ချို့သောသူတွေကလဲ ရောဂါပျောက်မည်အထင်ဖြင့် ဆေးညွန်းဆေးစာကိုပဲ ဖတ်ကြပါတယ်။ တစ်ချို့ကတော့ လိမ်းရုံပဲ လိမ်းကြတယ်(သမာဓိ)။ လိမ်းတော့ ခဏတာပျောက်ပါတယ်။ တစ်ချို့ကတော့ အညွန်းမဖတ်ပဲ သောက်ကြပါတယ်။ တစ်ချို့ကျပြန်တော့ ဆေးညွန်းနဲ့ ဆေးကို မှန်မှန်ကန်ကန်မသောက်ကြပြန်ဘူး။ ဒါနဲ့ အနာတွေက အမြစ်ပြတ် မပျောက်ဘဲ ပြန်ပြန်ဖြစ်နေခဲ့တာပေါ့။
အဲဒါကြောင့် ကျနော်အပါအ၀င် ပုထုဇဉ်လူသားတွေဟာ အနာရူးတွေ၊ကိလေသာရူးတွေပါပဲ၊
( ပုထုဇ္ဖနော ဥမ္မတ္တကော)လို့ ပြောခဲ့ကြ၊ဆိုခဲ့ကြတာနေမှာပါပဲ ။ အနာတွေမရှိတဲ့လက်တွေဖြစ်နေပြီဆိုယင်တော့ ဆားငန်ရေနဲ့စိမ်ပေမယ့်လည်း စပ်ဖျင်းဖျင်းဝေဒနာကိုတော့ ခံစားရတော့မယ်မဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာ။ (ကိလေသာ)အနာပျောက်တဲ့သူပေါ့ဗျာ။ ဗြဟ္မာတွေမှာတော့ ဘုရားဖူးဖို့အတွက် မျက်စိနဲ့ တရားနာဖို့အတွက် နား ဆိုတဲ့ အနာပေါက်နှစ်ခုပဲပါတယ်ဆိုပဲ။
အင်း…………..ဒီလိုနဲ့ မဒီရဲ့ ”အိပ်မက်ချစ်သူ“ တေးသွားသံစဉ်က တိတ်သွားခဲ့ပေမယ့် ကျနော့်အတွေးရေယာဉ်မှာတော့ မရပ်နိုင်သေးဘဲ(သတိ)လှော်တက်တစ်ခုကို တပ်ဆင်လိုက်ပြီး လှိုင်းကလဲကြီး လေကလဲထန် ကမ်းမမြင်၊လမ်းမမြင် သမုဒ်ပင်လယ်ပြင်မှာ ၀ဲသြဃစုပ်မသွားခင် တစ်ဖက်ကမ်းဆီကို သစ္စာရှာပုံတော်ခရီးအတွက် ဆက်လက်ရွက်လွှင့်ရအုံးမယ်လေ။ ကဲ မြန်မြန်လေးလွှင့်ကြစို့လား
Posted by ကျော်သုည at 8:55 PM
chomarmyathaung April 6, 2010 at 5:19 AM